Gịnị ka Buffer overrun chọpụtara? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Echekwa overrun dtected - mfe azịza nke ajụjụ
Echekwa overrun dtected - mfe azịza nke ajụjụ
Gịnị ka Buffer overrun chọpụtara?
.B.echekwa overrunkemgbeachoputaranke emerụ usoro mmemme nke Esịtidem. Usoro ihe omume ahụ enweghị ike ịga n'ihu na-egbu ya n'enweghị nsogbu ọ bụla, a ga-akwụsịrịrị ya. Ihe iseokwu a nwere ike ime mgbe ejiri ngwa ma ọ bụ Windows service pack arụnyere.
mfc71.dll na-efu efu
Kedu otu esi edozi ihe nchekwa echekwara achọpụtara na oku ọrụ?
Gaa na folda egwuregwu ahụ (C: / Ihe mmemme (x86) / Steam / steamapps / common /Oku ọrụ)
Gbanwee aha nke 'CoDSP ' ka 'mohaa '
Mepee Librarylọ Akwụkwọ Steam gị wee pịa bọtịnụ '+ ADD A GAME ... ' na aka ekpe aka ekpe nke mpio ahụ.
Pịa 'Tinye egwuregwu na-abụghị Steam ... '
Pịa 'Chọgharịa ... '
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na achọpụtara ihe echekwa gafere?
Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụrụ na sistemụ gị ahụrụ ihe ọ bụla, ọ ga-ekwe omume na kọmputa gị ga-oyi kpọnwụrụ ma ọ bụ enweghị ike buut. Ọ bụrụ na usoro ndị a dị n'elu enweghị ike idozi esemokwu ahụ maka gị, ọ bụ oge dị elu iji gbalịa mmezi mmalite.
Esi edozi ndozi ndabere echekwa na Windows 10?
Idozi 2: Gbaa SFC Ma DISM Command. Na mgbakwunye, faịlụ sistemụ rụrụ arụ ma ọ bụ faịlụ onyogho Windows nwekwara ike iduga na nchekwa echekwara na kọmputa gị. Iji dozie esemokwu dabere na nchekwa nchekwa n'okwu a, ịnwere ike ịnwale iji sistemụ Njikwa System (SFC) na ntinye ọrụ ntinye na njikwa (DISM).
Gịnị mere m ga-eji echekwa overrun njehie na Steam?
Ihe nzuzu bụ na ndị na-ere ahịa na-agba ọsọ n'otu usoro mana ọ bụghị nke uzuoku. Ọ bụrụ na idetuo na mado ụlọ ahịa exe na folda uzuoku, ọ na-arụ ọrụ site na ịkụ aka exe nke ọma, mana ọ bụrụ na ịnwa ịmalite ya site na steam, ị ga-enweta njehie nchekwa ahụ.
Esi edozi Oku ọrụ 1 nchekwa echekwa?
Ebe a bụ otu n'ime mfe idozi maka oku nke ọrụ 1 echekwa overrun njehie ..! Ihe ị ga - eme bụ naanị nyegharịa codmp / codsp ka 'mohaa' ntụgharị 'mohaa.exe' ma danye ya. Ọ bụrụ na vidiyo m masịrị gị, nye mkpịsị aka aka gị wee kwuo azịza gị .... echefukwala ịdenye aha! Na-adọnye ...